नीतिका कुरा : गीतामा जीवन र दर्शनको सार | Kendrabindu Nepal Online News
नीतिका कुरा : गीतामा जीवन र दर्शनको सार
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १३:०४
खासमा मानिस जन्मिएपछि मर्छ यो ध्रुर्वसत्य कुरा हो । तैपनि मान्छे मर्नबाट डराउँछ । भावनामा बग्छ मान्छे , भन्छ ‘जीवन कर्कलाको पानी’ हो । कहिलेकाहिं कठोर बन्छ मान्छे, स्वार्थमा लिप्त हुन्छ । त्यतिबेला उसले के गर्नु हुन्छ र के हुँदैन भन्ने बिर्सिएको हुन्छ । हो यस्तै कठोरता र भावना कुनैले पनि खासमा राम्रो गर्दैन । यहि ज्ञान सबैलाई दिलाउनका लागि हिन्दु धर्ममा एउटा महान ग्रन्थ छ, गीता । यसमा अर्जुनलाई भगवान कृष्णले दिएका उपदेशहरु वर्णन गरिएको छ । जुन अहिले पनि मानवजीवनका लागि अति नै उपयोगी छन् । अर्जुन कर्मबाट विमुख भएपछि श्रीकृष्णले उनलाई केहि उपदेश दिए । त्यही उपदेश नै गीता हो ।
गीताको जीवन दर्शन
गीताको जीवन दर्शन अनुसार मानिस महान छ । अमर छ, यसमा असीम शक्तिको भण्डार छ । गीतालाई संजीवनी विद्याको संज्ञा पनि दिइएको छ । मानिसको कर्तव्य के हो ? यसैको बोध गराउनु गीताको परम लक्ष्य हो । श्रीकृष्णले यस उपदेशपछि अर्जुनलाई कर्तव्यपथमा अडिग रहन प्रेरित गरे । अन्ततः अर्जुनले युद्ध लडे । असत्यमाथि सत्यको जीत भयो ।
गीतामा ७ सय श्लोक
गीतामा कुल सात सय श्लोक छन् । गीतालाई ज्ञानको सर्वोच्च स्थान दिइएको छ । ज्ञानको प्राप्तीले नै मानिसको सबै जिज्ञासाको समाधान हुन्छ । त्यसैले गीतालाई सर्वशास्त्रमयी पनि भनिन्छ । गीताको सार हो, कर्म गर, फलको आशा नगर । जब हामी फलको इच्छा राखेर काम गर्छौ, यदि त्यो प्राप्त भएन भने दुःखी हुन्छौ । त्यसैले सुखी रहनका लागि केवल काम गरौं, त्यो पनि निष्काम भावले ।
ज्ञानको अद्भूत भण्डार
श्रीमद्भागवत गीता ज्ञानको अद्भूत भण्डार मानिन्छ । गीताले हाम्रो सोच्ने, हेर्ने र बुझ्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । जीवन र जगतको वृहत्तर ज्ञान यसबाट आर्जन हुन्छ । यसले संकटमा जुध्न पनि प्रेरणा दिन्छ । हामी कुनैपनि काम गरेपछि तुरुन्तै त्यसको नतिजा चाहन्छौ तर विद्वानहरु भन्छन् , धैर्य नहुँदा अज्ञान, दुःख, मोह, क्रोध, काम र लोभबाट निवृत्ति मिल्दैन । गीताले मानव मात्रको जीवनमा प्रतिक्षण आउने सानाठूला संग्रामको सामना गर्न शक्ति दिन्छ । के छ त गीतामा ?
२. नर्कको तीन द्वार छ, क्रोध, वासना र लालचा । अर्थात् हामीले भन्ने गरेको नर्कको स्रोत भनेको रिस, राग, क्रोध, वासना नै हो । यसले हाम्रो जीवन नै नर्कमय बनाइदिन्छ ।
६. जसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् , त्यो मन शत्रु बराबर हो ।
७. जो व्यक्ति गुनासो गर्छन् , उसलाई कहिले पनि सुख मिल्दैन ।
१०. व्यक्तिले जे चाहन्छन् , त्यो बन्न सक्छन् । यद्यपी त्यसका लागि आफ्नो इच्छालाई पूर्ण विश्वासका साथ स्मरण गर्नुपर्छ ।
१४. एक ज्ञानवान व्यक्ति कहिले पनि कामुक सुखमा आनन्द लिदैन ।
१६. जब व्यक्तिले आफ्नो काममा आनन्द लिन्छ, तब ऊ पूर्ण ठहरिन्छ ।
गीताको बारेमा केही तथ्य
– यो विश्वकै महान ग्रन्थमा एक हो ।
– गीता एकमात्र यस्तो ग्रन्थ हो, जसको जयन्ती मनाइन्छ ।
– गीताको पृष्टभूमी महाभारतको युद्ध हो ।
– श्रीमद्भागवत गीताको १८ अध्यायय छ र महाभारतको युद्ध पनि १८ दिन नै चलेको थियो ।
– अर्जुनलाई भगवन कृष्णले गीताको उपदेश दिएका थिए ।
– गीताको भनाई के छ भने, आफ्नो कतव्र्य पालनमा लाभ हानीबारे सोच्नु हुँदैन ।
– गीताको ७ सय श्लोकमा त्यस समस्याको समधान छ, जो हरेक व्यक्तिले कहिले न कहिले सामना गरिरहनु पर्छ ।
– गीता खासमा अनुपम जीवन ग्रन्थ हो । जीवन उत्थानका लागि यसको स्वाध्याय हर व्यक्तिले गर्नुपर्छ ।
खासमा गीताले दिएको सार बुझ्ने हो भने हामीले सुख पाउन गाह्रो छैन । तर हामी अरुको डाहा गर्छौं, अरुको आलोचनामै समय सक्याउँछौं भने जीवनमा दुःखबाट कहिले पनि मुक्ति पाउँदैनौं । यथार्थमा जीवनमा आफू अरुको साहारा बन्न सकियोस र अरुको भर पर्नु नपरोस् भन्नेहरुले गीतालाई आधार बनाएर सुख पाउन सक्छन् ।
गीतामा जीवन, दर्शनको सार, नीतिका कुरा
Prevसुर्खेतमा जीप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
काभ्रेमा बस दुर्घटना, ४४ जना घाइतेNext
नीतिका कुरा : कहाँ बस्छन् ईश्वर ?